सभामुख बारे मलाई नबोल्ने आदेश आएको छ : नेम्वाङ – KhabarKhurak
कोरोना भाइरस कोभिड १९ आजको राशिफल राशि नेपालमा कोरोना भाइरस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विचार/ब्लग दुर्घटना
सभामुख बारे मलाई नबोल्ने आदेश आएको छ : नेम्वाङ
बुटवल, २३ मंसिर । संविधानसभाका अध्यक्ष तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफू पाँचौ पटक सभामुख बन्न तयार रहेको संकेत गर्नु भएको छ । कृष्णबहादुर महराले राजीनामा पछि लगत्तै सभामुखमा नाम चर्चामा आउँदा नेम्वाङले आफू पुनः सभामुख हुन इच्छुक नरहेको प्रतिक्रिया दिनु भएको हो । आफूले सो प्रतिक्रिया दिए पछि पार्टीका नेताहरुले सभामुख बन्ने वा नबन्ने बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नदिन भने पछि नेम्वाङ पछिल्लो समय यो प्रश्नमा उम्किने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रुचि नेम्वाङलाई नै सभामुख बनाउने रहेकाले पाँचौ पटक उहाको सम्भावना बढेको कतिपय नेताहरु बताउदै आएृका छन् । मैले सुरुमा यस बारेमा आफ्ना केही टिप्पणीहरु गर्न खोज्दा दलका नेताले मलाई अहिले तपाईं केही नबोल्नुस् भनेका छन् हिलो पटक ०६३ सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेका नेम्वाङ त्यस पछि तत्कालीन विद्रोही माओवादी सहितको अन्तरिम संसदको पनि सभामुख निरन्तर भए ।
०६४ र ०७० को संविधान सभा निर्वाचन पछि नेम्वाङ नै संविधान सभा अध्यक्ष र सभामुखमा दोहोरिए । नेकपा भित्र अग्नि सापकोटा र देव गुरुङ पनि सभामुखको लबिङमा रहेका र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सभामुख बन्ने निश्चित भए पछि मात्र उपसभामुखबाट राजीनामा दिने बताइरहेका बेला नेम्वाङले भन्नु भयो निर्णय पार्टी र संसदले सहज रूपमा गर्ने दाबी गरेका छन् ।
नेम्वाङले आफू सभामुख बन्नु पर्ने अवस्थामा तयार रहेको संकेत मात्र गर्नु भयो संविधानबमोजिम उपसभामुख फरक दललाई दिनु परे पनि कांग्रेसले नपाउने आशयसमेत प्रकट गर्नु भयो । उपनिर्वाचनका बेला अध्यक्ष प्रचण्ड सँगै अर्का अध्यक्ष ओलीको प्रतिनिधिका रूपमा देश दौडाहा गरेका नेम्वाङले उपनिर्वाचनले सत्तापक्षलाई नमात्तिन र प्रतिपक्षलाई नआत्तिन सन्देश दिएको बताउनु भयो ।
प्रस्तुत छ नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ सँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी
प्रमुख प्रतिपक्षले संसद खोज्न थालेको छ, प्रधानमन्त्री बिरामी र सभामुख जेलमा भन्दै संसदबाट जनताका आवाज बोल्न पाइएन भन्ने गुनासो पनि आएको छ । सत्तापक्षको उपनेताको हिसाबले प्रतिपक्षको सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?
प्रतिपक्षले सडक नखोजेर संसद खोज्नु यो राम्रो कुरा हो । यो संसदीय प्रणाली, जसलाई हामीले संविधानमा स्थापित गरेका छौं र प्रभावकारी बनाउन चाहेका छौं, त्यसका लागि यो सुखद संकेत हो । प्रतिनिधि सभा नियमित रूपमा बस्नुपर्छ । सदाको चलन यो हिउँदे अधिवेशन पुसको १२र१३ गतेतिर बस्ने हो । त्यस बारेमा अहिले छलफल भइसकेको छैन । तर, प्रतिपक्षको यो चाहना र भावनालाई सम्मान गर्दै सत्तापक्षले छलफल गरेर चाँडै टुंगोमा पुग्छ ।
प्रधानमन्त्री विरामी भएको र सभामुखको टुंगो लगाउन नसकेको दुःखका बीच सत्तापक्षले संसदलाई पछि धकेल्न खोजेको आशंका पनि गरेको छ नि प्रतिपक्षले त ?
त्यसो होइन । प्रधानमन्त्री अहिले स्वास्थ्य उपचार गरेर फर्किएपछि स्वस्थ हुनुहुन्छ । उहाँ नियमित काममा फर्किसक्नुभएको छ । जहाँसम्म सभामुखको चयनको कुरा छ, सभामुख संसदबाटै चयन हुन्छ । नियमित संसदको अधिवेशन चाँडै बस्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस पछि संसदले सभामुख पाइहाल्छ ।
तर, दुई महिनाभन्दा बढी भयो सभामुख नभएको, यसले केही असर गरेको छैन ?
सभामुखको विशेषतः संसद सञ्चालनमै भूमिका हुन्छ । त्यसभन्दा बाहिर पनि संसद नबसेका बेला समितिको क्रियाशीलताका सन्दर्भमा पनि सभामुखको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले सभामुखको अरुबेला काम हुँदैन भन्ने हुन्न । सभामुखको आवश्यकता जहिलेसुकै हुन्छ । तर, हामीले कल्पना नगरेको स्थिति अहिले बन्यो । यस्तो स्थितिलाई जतिसक्दो चाँडो अन्त्य गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
जति सक्दो चाँडो गर्नलाई नेकपाले नसकेको हो ?
मलाई लाग्छ, हामी मंसिर १४ गते र त्यसको आसपासम्म उपनिर्वाचनमै व्यस्त थियौं । सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबै उपनिर्वाचनमा व्यस्त रह्यौं । अब त्यसबाट मुक्त भइसकेका छौं । सभामुख चयनका सन्दर्भमा अब छलफल हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले आज ११ बजे देशका नाममा सम्बोधन गर्दै
लकडाउन १ हप्ता थपियो बैशाख ३ सम्म घरभित्रै बसौं
क्वारेन्टाइन र राहत वितरण मापदण्ड परिमार्जनः देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने
चैतमा नेपाल भित्रने सबैको कोरोना र्‍यापिड टेष्ट गरिने
कार पल्टीदा १ जनाको ज्यान गयो ४ घाईते
भारतमा कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा, नेपाललाई खतरा
अमेरिकामा कोरोनाः स्थिति भयावह बन्दै, २४ घन्टामा १२ सयको मृत्यु, ३० हजार बढी नयाँ बिरामी
कोभिड–१९ को संक्रमण भएका बेलायती प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि आइसीयूमा राखियो